Turkiga oo ka hadlay qarixii xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho - Awdinle Online
Iyada oo xalay Magaalada Muqdisho uu ka dhacay qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo lagu weeraray Maqaayada Luul Yemeni oo ku taal wadada hormarta Dekadda Muqdisho ayaa waxaa qaraxaasi ka hadlay Dowladda Turkiga.
War-Saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda turkiga ayaa waxaa lagu sheegay inay aad uga xun yihiin qaraxaas oo ay ku dhinteen 20 Ruux oo isugu jira shacab iyo Askar iyo dhaawaca 30 kale, isla markaana ay ka tacsiyadeeynayaan dadki ku dhintay qaraxaas.
“Waxaan si adag u cambaareyneynaa weerarkan foosha xun ee argagaxiso waxaanan tacsi u direynaa shacabka walaalaha ah iyo Dowlada Soomaaliya. Waxaan u rajeynaynaa naxariista Eebbe korkiisa kuwa naftooda ku waayey,waxaana u rajeeyneynaa caafimaad deg deg ah kuwa dhaawacmay, Waxaan mar kale carrabka ku adkeyneynaa inaan sii wadi doonno garab istaagga dadka walaalaha ah e Soomaaliya ee dagaalka ay kula jira argagixisada ayaa lagu yiri” Warka kasoo baxay Turkiga.
Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxaas ay ku dhinteen 10 Ruux 30 kalena ay ku dhaawacmeen, waana markii labaad ee qarax lagu weeraro Maqaayada Luul Yemeni, waxaana mas’uuliyada qaraxa sheegtay Al-Shabaab, iyaga oo sheegay inay la beegsadeen Saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Previous articlePuntland oo dagaal ku qabtay maxaabiistii laga daayay Xabsiga Boosaaso
Next articleWeerar ka dhacay Dhuusamareeb & khasaaro ka dhashay